Umuthi wokugoma omusha ungakuguqula ukulwa nomalaleveva | Scrolla Izindaba
Umuthi wokugoma omusha ungakuguqula ukulwa nomalaleveva
Umuthi wokugomela umalaleveva usudlulise ukuhlolwa kwabantu kusenesikhathi e-Burkina Faso, kwavula indlela entsha ekulweni nalesi sifo esisengomunye wababulali abakhulu e-Afrika.
Umuthi wokugomela umalaleveva i-R21 wakhiqizwa yiqembu labacwaningi abavela emazweni amaningi futhi, ngonyaka odlule, wahlolwa phakathi kwezingane ezingama-450 enhlokodolobha yezwe e-Ouagadougou.
Leli thimba, eliholwa nguSolwazi uHalidou Tinto, lithole ukuthi umuthi wokugoma uphephile ngemuva kokuthi uvimbele ukuminyana kukamalaleveva ngamaphesenti angama-77% wabantu ababambe iqhaza abawutholayo.
Lokhu kusho ukuthi umuthi wokugoma i-R21 ungowokuqala ukwedlula umgomo odingekayo we-World Health Organisation ngamaphesenti angama-75% womuthi wokugoma osathuthukiswa.
Phambilini, umuthi wokugoma osebenza kahle kakhulu kuze kube manje ubukhombise kuphela isilinganiso sokusebenza esingama-55% ezivivinyweni zabantu.
Esigabeni esilandelayo sezilingo, izingane eziyi-4,800 ezineminyaka ephakathi kwezinyanga ezinhlanu neminyaka emithathu zizokwenziwa ngokushesha emazweni amane ase-Afrika ukuqinisekisa okutholakele.
Isigaba sesithathu socwaningo sizokwenzeka e-Mali, e-Burkina Faso, e-Tanzania nase-Kenya.
Ngonyaka odlule e-Afrika, umalaleveva ubangele ukushona kwabantu okuphindwe kane kune-Covid-19, kanti izingxenye ezimbili kwezintathu zalabo ababulawa yiyo yizingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu.
UTinto uthe “silangazelele ukuhlolwa okuzayo ‘kwesigaba sesithathu’ ukukhombisa imininingwane emikhulu yokuphepha nokusebenza komuthi okudingeka kakhulu”.
Umbhali walolu cwaningo, u-Adrian Hill, wabhala ku-Quartz Africa, ukuthi “umuthi wokuvikela umalaleveva ususondele kakhulu kunakuqala.”